Warar - Teknolojiyad | Tirinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee kartoonka luminta iyo tallaabooyinka horumarinta.
Tiknoolajiyadda | Tirinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee kartoonka luminta iyo tallaabooyinka horumarinta.
Luminta shirkadaha kartoonada ayaa ah qodobka ugu weyn ee saameeya qiimaha. Haddii luminta la xakameeyo, waxay kordhin kartaa waxtarka shirkadda illaa xad ballaaran waxayna hagaajin kartaa tartanka badeecadaha. Aynu falanqeyno khasaaraha kala duwan ee soo gaadhay wershada kartoonka.
Si fudud haddii loo dhigo, khasaaraha guud ee warshadda kartoonka ayaa ah qaddarka warqad ceeriin ah oo laga soo jaray xaddiga alaabooyinka la dhammeeyay ee la dhigay kaydinta. Tusaale ahaan: soo-gelinta warqadda ceyriinka ah ee billaha ah waa inay soo saartaa 1 milyan oo mitir murabac ah, oo mugga keydinta badeecada ee dhammaatay ay tahay 900,000 oo mitir murabac ah, ka dibna wadarta khasaarihii warshadda ee bishaan socota = (100-90) = 100,000 oo mitir murabac, iyo wadarta guud ee khasaaraha waa 10/100 × 100% -10%. Khasaaraha guud ee noocan ahi wuxuu noqon karaa oo keliya tiro guud. Si kastaba ha noqotee, u qaybinta khasaaraha nidaam kasta wuu cadaanayaa, oo way noo sahlanaan doontaa inaan helno dariiqooyin iyo horumarro lagu yareeyo khasaaraha.
1. Kaarboor lumay jiingado
Qashinka alaabada cilladaysan
Alaabada cilladaysan waxay tixraacayaan alaabooyinka aan u qalmin ka dib markii ay gooyeen mashiinka goynta.
Qeexida Qaaciddada: Aagga Khasaaraha = (jarista balaca × lambarka goynta) length dhererka goynta × tirada mindiyo goynta alaabada cilladaysan.
Sababaha: hawlgal aan habboonayn oo ay qaadaan shaqaaluhu, dhibaatooyinka tayada leh ee warqadda aasaasiga ah, taam ahaanta, iwm.
Definition Qeexida qaaciddada
Aagga luminta = (jarista balaca × tirada googo'an) × dhererka goynta × tirada mindiyo goynta alaabada cilladaysan.
Qiyaasaha hagaajinta: xoojinta maaraynta hawl wadeenada iyo xakamaynta tayada waraaqda cayriin.
Loss Wax soo saar badan
Wax soo saarka Super waxa loola jeedaa alaab tayo leh oo dhaaftay xaddiga warqadda ee hore loo sii cayimay. Tusaale ahaan, haddii 100 xaashi loo qoondeeyey in la quudiyo, iyo 105 xaashi oo alaab tayo leh la quudiyo, markaa 5 ka mid ahi waa alaabooyin waaweyn.
Qeexida Qaaciddada: Aagga waxsoosaarka Super = = (jarista balaca × tirada goos gooska) × dhererka goynta × (tirada jareyaasha xun-tirada jareyaasha jadwalka ah).
Sababaha: warqad aad u tiro badan oo saaran rooga, warqad aan sax ahayn oo lagu soo qaadaa jiifka, iwm.
Qiyaasaha hagaajinta: adeegsiga nidaamka maareynta wax soosaarka roogaarka ayaa xallin kara dhibaatooyinka waraaqo aan sax ahayn ku shuban iyo warqad aan sax ahayn oo lagu qaato hal mashiinka lebbiska ah.
Loss Goynta luminta
Goynta waxaa loola jeedaa qaybta la jarjaray markii la jarayo geesaha iyadoo la jarayo oo la marinayo mashiinka leylinta.
Qeexida Qaaciddada: Aagga goos gooska goosashada = (waraaq xajmi-gooye ah × tirada gooyn) × dhererka goynta × (tirada alaabada wanaagsan + tirada alaabada xun).
Sababta: luminta caadiga ah, laakiin haddii ay aad u ballaaran tahay, sababta waa in la falanqeeyo. Tusaale ahaan, haddii balaca goynta amarka uu yahay 981 mm, oo baaxadda ugu yar ee jarista uu u baahan yahay corrugator-ka ay tahay 20mm, ka dibna 981mm + 20mm = 1001mm, oo si sax ah uga weyn 1000mm, isticmaal kaliya 1050mm warqad si aad u tagto. Ballaca cirifku waa 1050mm-981mm = 69mm, oo aad uga ballaaran xaragada caadiga ah, taas oo keeneysa aagga qasaaraha gooynta in la kordhiyo.
Qiyaasaha hagaajinta: Haddii ay yihiin sababaha kor ku xusan, tixgeli in amarka aan la jarjarin, warqadana lagu quudiyay warqad 1000mm ah. Marka kan dambe la daabaco oo sanduuqa la duuduubo, warqad balac ah oo 50mm ah ayaa la keydin karaa, laakiin tani waxay ilaa xad yareyn doontaa yareynta daabacaadda. Qiyaas kale ayaa ah in waaxda iibku ay tan tixgelin siin karto markay aqbasho amarrada, hagaajiso qaab dhismeedka dalabka, ayna hagaajiso amarka.
Loss Tab lumid
Tabbing waxaa loola jeedaa qaybta la soo saaray markii loo baahan yahay shabakad ballaaran oo warqad ah si loogu quudiyo waraaqda sababtoo ah yaraanta warqadda aasaasiga ah ee warqadda aasaasiga ah. Tusaale ahaan, amarka waa in laga sameeyaa warqad ballacdiisu dhan yahay 1000mm, laakiin la'aanta warqad aasaasi ah oo dhan 1000mm ama sababo kale awgood, warqadda waxay u baahan tahay in lagu quudiyo 1050mm. 50mm dheeraad ah waa tabo.
Qeexida Qaaciddada: Aagga tabashada luminta = (shabakadda xaashida ah ee ka dambeysa webka xaashida ah ee loo qorsheeyey) × dhererka goynta × (tirada mindiyo goynta alaabta wanaagsan + tirada mindiyo goynta alaabada xun)
Sababaha: keydinta warqad ceyriin ah oo aan macquul aheyn ama iibsashada warqad ceyriin oo aan munaasib aheyn waaxda iibka.
Tallaabooyinka looga hortagayo hagaajinta: Soo iibinta shirkadda waa inay dib u eegis ku sameysaa haddii soo iibinta waraaqaha ceyriinka ah iyo keydinta ay la kulmaan baahida macaamiisha, iskuna dayaan inay kala shaqeeyaan macaamiisha warqad diyaarinta si loo xaqiijiyo fikradda shaqada t-mode. Dhinaca kale, waaxda iibku waa inay horay u sii dhigtaa liistada dalabka maaddada si waaxda wax iibsiga loo siiyo wareegga soo iibsiga si loo hubiyo in warqaddii asalka ahayd ay jirto. Waxaa ka mid ah, luminta alaabada cilladaysan iyo luminta wax soo saarka super waa inay ka tirsanaadaan waxqabadka luminta waaxda wax soo saarka kartoonada jiingado, taas oo loo adeegsan karo tusmaynta qiimeynta waaxda si kor loogu qaado horumarka.
2. Khasaaraynta sanduuqa
Khasaare dheeraad ah
Qadar cayiman oo wax soo saar dheeraad ah ayaa lagu dari doonaa marka kartoonka la soo saaro sababo la xiriira tijaabada mashiinka daabacaadda iyo shilalka inta lagu jiro soo saarista kartoonka.
Qeexitaanka Qaaciidada: Aagga luminta isku-darka = jaangooyada dheeriga ah ee jadwalka ah, area aagga kartoonka.
Sababaha: luminta badan ee daabacaadda daabacaadda, heerka hawlgalka ee hawlwadeenka daabacaadda daabacaadda, iyo luminta badan ee xirxirashada marxaladda dambe. Intaas waxaa sii dheer, waaxda iibku ma laha wax xakameyn ah qadarka amarrada dheeraadka ah ee la soo rogay. Xaqiiqdii, looma baahna in lagu daro tiro intaa dheer oo dheeri ah. Tirada badan ee dheeraadka ahi waxay u horseedi doontaa soo saar xad-dhaaf ah oo aan loo baahnayn. Haddii soosaarka xad dhaafka ah aan la dheef-shiidi karin, wuxuu noqonayaa "bakhaar dhintay", taas oo ah, soo-daahitaan soo-daahday, oo ah khasaaro aan loo baahnayn. .
Qiyaasaha hagaajinta: Sheygan waa inuu ka tirsanaadaa waxqabadka waaxda sanduuqa daabacaadda, taas oo loo adeegsan karo tusmaynta qiimaynta ee waaxda si kor loogu qaado tayada shaqaalaha iyo heerka hawlgalka. Waaxda iibintu waxay xoojin doontaa albaabka mugga amarka, iyo soosaarka mugga iyo soosaarka fudud ee wax soo saarka Si loo sameeyo isbeddel, waxaa lagu talinayaa in lagu daro kordhinta maqaalka koowaad si loo xakameeyo ilaha si looga fogaado in ka badan ama aan loo baahnayn wax soo saar.
Loss Goynta lumitaanka
Marka kartoonka la soo saaro, qaybta hareeraha kartoonada ah ee mashiinka wax lagu gooyaa dhinto ayaa ah khasaaraha geeska.
Qeexida Qaaciddada: Aagga khasaaro soo noqnoqda ee Edge = (aagga waraaqaha la diyaariyey ka dib markii la rogo) quant tirada bakhaarka.
Sababta: lumis caadi ah, laakiin sababta waa in la falanqeeyo marka ay aad u badan tahay. Waxa kale oo jira mashiinno otomaatig ah, buug-gacmeed, iyo kuwo otomaatig u dhinta, iyo shuruudaha loo rogo ee loo baahan yahay sidoo kale way ka duwan yihiin.
Qiyaasaha hagaajinta: mashiinada goynta kaladuwan ee kaladuwan waa in horay loogu sii daraa iyadoo laxidhiidhaya geesaha laxiriira si loo yareeyo luminta geeska inta ugu macquulsan
Version Nooc buuxa oo jarista luminta
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha kartoonka ayaan u baahnayn daadinta qarkiisa. Si loo hubiyo tayada, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo aag gaar ah oo ku wareegsan kartoonka asalka ah (sida kordhinta 20mm) si loo hubiyo in kartoonka duuban uusan daadin. Qeybta 20mm ee korodhay waa luminta goynta bogga oo buuxa.
Qeexida qaab-dhismeedka: aagga luminta jarista bogga oo buuxa = (aagga warqadaha la diyaariyey ah - aagga kartoonka dhabta ah) × Tirada bakhaarka.
Sababta: lumis caadi ah, laakiin markay tiradu aad u badan tahay, sababta waa in la falanqeeyo lana wanaajiyo.
Khasaaraha lama tirtiri karo. Waxa aan sameyn karno ayaa ah inaan hoos u dhigno khasaaraha illaa heerka ugu hooseeya uguna macquulsan iyadoo loo marayo habab iyo farsamooyin kala duwan intii suurtagal ah. Sidaa darteed, muhiimada kala qeybinta khasaaraha qeybta hore ayaa ah in loo ogolaado habsami u socodka in la fahmo in qasaaraha kala duwan uu macquul yahay, hadii ay jirto meel lagu hagaajin karo iyo waxa loo baahan yahay in la hagaajiyo (tusaale ahaan, hadii luminta alaabada super ay aad u weyn, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in dib loo eego bal in corrugator-ku uu soo qaato warqadda.Si sax ah, ka bood barar aad u weyn, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in dib loo eego in diyaarinta warqadda asalka ah ay macquul tahay, iwm.) si loo gaaro ujeeddada xakamaynta iyo yaraynta luminta, yaraynta kharashyada, iyo hagaajinta tartanka badeecada, waxayna samayn kartaa tilmaamayaasha qiimaynta ee waaxaha kala duwan iyadoo loo eegayo khasaarooyin kala duwan. Ku abaal mari wanaagga oo ciqaaba kuwa xun, kuna kordhi xamaasadda hawlwadeennada si loo yareeyo khasaaraha.